पेरुको जंगल भएर बग्ने सेनाइ टेम्पेसिका रिभर ज्यानमारा नदी ! « News24 : Premium News Channel
पेरुको जंगल भएर बग्ने सेनाइ टेम्पेसिका रिभर ज्यानमारा नदी !
सामान्यतया नदीलाई जीवनसँग जोड्ने गरिन्छ । मानव सभ्यताको विकास पनि नदी किनारबाटै भएको मानिन्छ । तर, पेरुको जंगल भएर बग्ने सेनाइ टेम्पेसिका रिभरलाई अत्यधिक तातोका कारण ज्यानमारा नदीका रुपमा चिनिन्छ । यो नदीको तापक्रम ५० देखि ९० डिग्री सेल्सियससम्म हुने गर्दछ ।
पेरुमा रहेको सेनाइ टेम्पेसिका रिभर ज्यनामारा नदीका रुपमा चिनिन्छ । बगिरहेको यो नदीको तापक्रम सामान्यतया ५० देखि ९० डिग्री सेल्सियससम्म हुने गर्दछ । अझ कुनै–कुनै ठाउँमा त यसको तापक्रम १०० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुने गर्दछ । चारैतिर तातो पानीको बाफ फैलिएका कारण नदी वरिपरि केही पनि स्पष्ट देखिँदैन । जसले गर्दा जनावरहरु यो नदीमा खसेर मर्ने गरेका छन् ।
हाम्रै देशमा पनि धेरै ठाउँमा तातो पानीको कुण्ड, पोखरीहरु छन् । तर बग्दै गरेको नदीको पानीको तापक्रम यति धेरै हुनु विज्ञानको समझ भन्दा बाहिर छ । यो नदी वरिपरि कुनै ज्वालामुखी पनि छैन । तर कुनै समय यहाँ ठूलो भूकम्प आएको हुनसक्ने र जसका कारण नदी भास्सिएर जमिन भित्रको तातो लाभा नदीको सम्र्पकमा आउँदा यसको पानी सधै उम्लिरहेको हुनसक्ने वैज्ञानिकहरुको धारणा छ ।